Ity horonantsary ity no voalohany amin'ny andiany amin'ny torolalana DIY torolalana momba ny fametrahana takelaka solar amin'ny tafo mivaingana. Ity torolàlana ity dia namboarina amin'ireo mpanamboatra angovo azo havaozina sy ireo tompon-trano izay liana amin'ny fametrahana ny rafitra keliny manokana. Asehon'izy ireo koa ny fomba ametrahantsika ny lalamby aluminium, mampifandray ny tariby, boaty combiner, ary mihazakazaka ny tariby elektrika ho an'ny fanaraha-maso, mpampita, ary bateria. Ity no trano GRATRA GRID iray ampiasan'ny turbine rivotra 1 sy takelaka solar 8. Io tranon-trano io dia mbola tsy natanan'ny JPS (Company Service Service an'ny Jamaika). Ary nesorinay tanteraka avy teo amin'ny rindrina izany. Ka ity trano ity dia feno herin'ny angovo azo havaozina. Noho izany dia misy takelaka solar 8 ary turbine rivotra 1. Ary izany no mpanjifa sambatra.
Zavatra ilaina amin'ny fametrahana tontonana solar panel
Takelaka solar 8 nidina tamin'ny 250W
Ny lalamby aluminium dia 2ft lava
Famaranana 8 sy famantaranandro 12
Boaty combiner iray 6 nopotehina
4 DC breaker 15Amp na 20Amp
50 tariby AWG 6 tariby mena sy mainty
Lalam-by aluminium ho an'ny fametrahana takelaka solar
Ny fanamafisana ireo takelaka mankany amin'ny alàlan'ny lalamby alumina ho an'ny fametrahana ny tontolon'ny masoandro
Voalohany, mandray ny takelaka solar manika ny tafo izahay ary manomana ny fametrahana ny takelaka solar. Izahay dia mampiasa bolt rawl mba hametrahana ny pako aluminium ho an'ny takelaka solar amin'ny tafo mivaingana.
Rawl dia iray amin'ireo mpanamboatra marika manana ny kalitao avo indrindra horonan nampiasaina ho an'ny fananganana, ny fikojakojana ny indostria ary ny fanavaozana tetikasa. Rawl anchor horonan dia ampiasaina indrindra amin'ny fametrahana rafitra amin'ny mivaingana, biriky, block ary vato.
Ho an'ity fametrahana solar panel ity dia nampiasa boloky M6 izahay ka mila lavaka 8mm ary tokony ho 35mm lalina. Ny halavam-bolan'ny aluminium 2 ny lavany 14 tongotra dia afaka mitazona takelaka solar 4. Ka dia mametraka ny takelaka izahay amin'ny laharana efatra. Rehefa mitafy ny tongotra dia tsara indrindra ny fametrahana ny tongotra vatokely sahabo ho 7 tongotra avy. Izahay dia mampiasa ny antsoina hoe T-Clamp na Mid-Clams araka ny hitanao eto. Ireo dia ampiasaina amin'ny fiarovana ny takelaka solar ary fametrahana L-clamp dia hapetraka amin'ny faran'ny panel tsirairay. Avy eo isika dia mandroso ary mahazo ny panel sur solar, ara-bakiteny. Ary ampitaina amin'ny lalamby alumina izahay.
Hamarino fa miatrika top-up ny tariby elektrika. Satria io no akaiky indrindra ao anaty boaty kitay. Eto isika dia manamafy ny T-Clamp na ny clams mid. Ireo dia mipetraka eo anelanelan'ny takelaka roa ary manamboatra ireo eo amin'ny tampony sy ilay eny amin'ny farany koa ianao. Raha mijery lalina amin'ity horonantsary ity ianao dia afaka mahita hoe aiza no namatoran'ny T-Clamp ireo rindrina roa mifanakaiky. Ary amin'ny farany dia mampiasa farany L-Clamps izahay. Izahay irery ihany no mampiasa L-Clamp amin'ny faran'ny laharana. Noho izany, dia mila clamp 4 ianao ho an'ny andalana tsirairay amin'ny takelaka solar izay misy roa amin'ny sisiny tsirairay. Eto isika dia manamafy kokoa ny Mid-Clamps misimisy kokoa amin'ny fametrahana tontonana solar.
Fifandraisana elektrika amin'ny fametrahana tontonana solar panel
Mampifandray ireo tariby herinaratra ho an'ny fametrahana ny tontolon'ny taratra solar
Midina eo ambanin'ny tontolonao solar ary mampifandray ireo tariby elektrika miaraka aminy, izany no ampahany henjana. Fa io dia mandroso tsara. Rehefa mampifandray ireo takelaka solar ianao amin'ny andian-dahatsoratra dia mampifandray ny tsy mahomby amin'ny tontolon'ny masoandro iray ianao amin'ny fiantraikan'ny iray hafa. Mihazona takelaka roa izahay. Ho an'ny fametrahana tontonana 8 an'ny tontolontsika, manana vondron'olona roa izahay. Samy nifandray tamin'ny mpanabanga fizaran-tany 15AMP tao anaty boaty kitapom-bokatra izahay.
Eto isika dia mametraka ny laharana faharoa. Izahay dia manome antoka fa mipetraka tsara ny laharana ary miantoka koa isika fa ny aloky ny tsipika eo alohan'ny afovoany dia tsy atsipy amin'ireo takelaka solar amin'ny tsipika aoriana. Zava-dehibe izany satria ny fandroranana dia hisy fiantraikany ratsy amin'ny vokarin'ny fametrahana ny tontolonao solar. Niteraka lavaka maromaro ianao nampiasa ny bitika 8mm drill. Ny ankamaroan'izy rehetra dia manome antoka fa 35mm ny halalin'ny lavaka ahafahan'ny vavak'i Raul.
Ny fametrahana boaty boaty
Ny andraikitry ny boaty combiner dia ny hitondra miaraka amin'ny famokarana kofehy solar maro. Manampy ihany koa izy ireo hanamafisana ny herin'ny fidirana ho ao anaty famahana lehibe iray izay mizara amin'ny mpanodikodina solar iray ho an'ny rafitra fiorenan'ny tsipika na ny fanaraha-maso ho an'ny rafitra off-grid. Ny takelaka solar dia mifangaro tsiroaroa. Vokatr'izany dia ny fifandraisan'ny mpivady tsirairay dia mifandray amin'ny mpandeha 15Amp. Ankoatr'izay dia ny fifandraisan'ny mpivady tsirairay dia mifandray amin'ny bara ratsy.
Ary farany, ny fototry ny fametrahana ny takelaka solar dia mifandray ihany koa ao amin'ny boaty combiner. Izy io dia miaro ny takelaka solar raha misy ny tselatra. Vokatr'izany, tariby 3 misy azy no mifamatotra amin'ny boatin'ny combiner. Ny ankamaroany dia manangana tariby ihany izy. Raha ny tariby 8 dia avy amin'ny takelaka izy ireo dia natambatra ho an'ny tariby roa ho an'ny mpandrindra ny fiampangana.
Ny fijerena ny fametrahana tontolon'ny masoandro 8
Eto izahay dia mampiasa ny marika fahitalin'ny misasak'alina. Eto izahay dia mametraka ny laharana faharoa amin'ny takelaka solar. Ireo takelaka ireo dia mifandray ihany koa. Izy ireo dia mifandray amin'ny tsy mahomby amin'ny fifantohana ary alefa any amin'ny mpandrindra ny mpitondra. Ary izao no fotoana ho an'ny tontolon'ny tara-masoandro farany anay. Eny, eo ianao manana an'io. Midina ny tontonana. Ankehitriny izahay dia handeha hamonjy ny tariby mandeha amin'ny herinay ary hampifandray azy ireo ao anaty boatin'ny kitay.
Ny teknisianina Ordain Brown dia mamita ny fifandraisan'ny tontonana ao anaty boaty combiner. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo breakers ary mampifandray ny tongotra tsara avy amin'ireo takelaka amin'ireo mpanapaka tsirairay. Ny tsy mivaona amin'ny baransy tsy momba ny atsy sy ny aroa amin'ny tany.
Avy amin'ny boaty Combiner hanomezana fahefana
Mampiasa ny lakile Allen hiantohana ny fametrahana ny takelaka solar
Tonga izao ny fotoana ampidinana ny tariby elektrikao avy ao anaty boaty mitambatra ary ho any amin'ny fifandraisan'ny pirinty elektrika izay ahitanao ny fanaraha-maso, mpanova, ary bateria. Ity dia hazakazaka somary naharitra lavitra tokoa ary azonao antoka fa hihena ny volanao ny tariby. AWG 6 dia tokony ho ampy. Ny tariby roa mifangaro roa dia azonay atao ny mihazakazaka azy ireo eny ambony habakabaka nefa mbola nampiasaina izahay. Izany dia manome antoka fa tsy tara ny masoandro.
Ary avy eo isika manana boaty fanaovana sary izay ahafahantsika misintona hiala avy eo ambony tafo hatrany amin'ny boaty fanaovana pirinty elektrika. Avy eo izahay dia miala amin'ny boaty fanaovana pirinty elektrika ary mandefa ny tariby ao anaty trano. Ho an'ny Controller Charge, ny Inverter sy ny bateria. Zava-dehibe ny hanananao teboka. Raha misy antony hanakorontana ny ho avy, dia afaka miditra ny tariby ianao.
TeamKB, misaotra betsaka anao nijery ny horonan-tsary ho amin'ity tutorial ity sy ny famakiana ilay lahatsoratra. Aza mijanona am-peo amin'ny horonan-tsary manaraka ao amin'ny andiany izay hanoro anao ny fomba hampifandraisana ny tontolon'ny masoandro amin'ny mpitantana ny fiampangana. Azafady azafady io lahatsoratra io ary zarao amin'ny namanao ao amin'ny Facebook ianao. Aza misalasala maneho hevitra ary mametraka fanontaniana amin'ity rafitra ity.
Misoratra anarana amin'ny horonantsary Oasis nataon'ny fianakaviana Trott Bailey ho an'ny horonan-tsary angovo azo havaozina azo ampiasaina!
Misaotra TeamKB, ndao isika #KeepBelieving.
Mpanorina ny Kimroy Bailey Foundation, KB Robotics ary KB Fanavaozana. Kimroy dia iray amin'ireo sain'ny injeniera avo indrindra teto amin'ny faritra ary neken'ny Praiminisitra, ny Governemanta Jeneraly ary ny IEEE, vondron'ny injeniera matihanina goavana indrindra eran'izao tontolo izao ho an'ny fanavaozana ny injeniera. Kimroy Bailey Robotics amin'izao fotoana izao dia miara-misalahy amin'ny CXC hampiditra ny Robotics sy angovo azo havaozina mankany amin'ny Sekoly avo manerana ny Karaiba.
TOSIN OLOFIN navalin'i
Tsara hariva KB, ny anarako dia Tosin avy any Nizeria, nandalina angovo azo havaozina, avy any Nizeria. tena mampiaiky ahy ny asa tsara ataonareo ry zama ao amin'ny jamaica, manana fahalalana momba ny masoandro aho nefa te hianatra fametrahana hybridan'ny masoandro sy ny rivotra miaraka, tsy haiko raha toa izy ireo no miofana amin'ny institiota fampiofanana anao ary raha misy Te-handray anjara aho. manantena ny hihaino. Misaotra.
Novambra 24, 2017 amin'ny 10: 00 pm
Kimroy Bailey navalin'i
Salama Tosin, Nizeria tsara tarehy irinay izany. Ny dingana dingana amin'ny dingana solar dia mifantoka amin'ny fametrahana rafitra tontolon'ny masoandro any an-tranonao raha ny fampianarana amin'ny Step by Step Wind turbine course dia hampianatra anao ny fomba hampidirana turbine rivotra amin'ny fametrahana ny masoandro.
May 29, 2020 amin'ny 8: 39 am
Ohatrinona ny vidin'ny solar panels?
Ohatrinona ny vola apetraka?
Misy ve ny rebate na bonus nomena mividy governemanta na orinasa mpampidi-bola?
Azonao atao ve ny mandeha tsy misy olana ary afaka mahazo vola ianao handefasana ny fahefana amin'ny alàlan'ny vata raha mifatotra ianao?
Novambra 28, 2017 amin'ny 4: 08 am
Charles Brown navalin'i
tena mahaliana ny mahafantatra momba ireo dingana fametrahana ny takelaka solar. Ampahafantaro anay fa ny vidin'ny fahazoana ireo fitaovana rehetra amin'ny fametrahana ary misy làlana ahafantarana ny hilentehan'ny masoandro eo amin'ny tontonana hahazoana angovo. Ny Dingana nataon'i Step Solar an-tserasera dia tena lalam-piofanana tsara indrindra amin'ny Internet.
Aprily 3, 2018 amin'ny 2: 51 pm
08Feb Febroary 8, 2013
Fanadinadinana tsiky any Jamaika: Mpamaham-bolan'ny taona
Ao ambadiky ny seho amin'ny TVJ, mitsiky i Jamaica talohan'ny mpitoraka bilaogy amin'ny taona tamin'ny talata 5 febroary 2013 ... hamaky bebe kokoa
24Aug Aogositra 24, 2014
Mpianatra 70, 5 andro, KB Ren Fanavaozana Robotics Summer Camp
Nalefan'i Jourdan Dunkley, mpandray anjara mirehareha ao amin'ny Kimroy Bailey Summer Robotics Camp. Jourdan (mpanoratra) faha-2 avy amin'ny fanampiana ankavanana amin'ny ... hamaky bebe kokoa